Dabeylo ciideed oo ka dhacay Dubai | Saadaasha Shabakadda
Dubai, ee Isutagga Imaaraatka Carabta, waxay noqotay, mahadnaqa dhismayaasha raaxada leh, oo ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee loo dalxiis tago Bariga Dhexe. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay xaqiiq tahay inay tahay magaalo casri ah oo dhismaheedu ku daydo kuwa magaalooyinka waaweyn ee reer galbeedka, haddana waa inaanan iloobin inay ku taal bartamaha lamadegaanka, sidaa darteed duufaannada ciidda waa wax lagu kalsoonaan karo.
Dadka ku nool magaalada ayaa loo bartay hadda, laakiin waa markii ugu horreysay ee dalxiisayaashu u soo booqdaan Dubai waxay noqon kartaa mid aan fiicnayn. Sawiradu runtii waa kuwo cajiib ah oo mid baa oran kara intaas kadib duufaan ciid ah magaaladii waa la aasay.
Laakiin ma jiraan wax xaqiiqda ka baxsan, tan iyo, marka laga reebo raaxo-darro gaar ah inta lagu jiro xilliga duufaantu socoto, ifafaalahaani ma matalayo wax khatar ah oo ku aaddan karaamada jir ahaaneed ee dadka. Dabcan, waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato joogitaanka waddada inta lagu jiro isla haddii aadan xirnayn muraayadaha ilaaliyaha, gaar ahaan haddii ay tahay xoogga ugu sarreeya. Khadadkaan hoose, waxaan ku arki karnaa muuqaal cajaa'ib leh oo ku saabsan Dubai oo si toos ah liqday ciid cidla ah:
Macluumaad dheeri ah - AEMET waxay iska kaashanayaan rakibida aaladaha sawir qaadaha cusub ee Morocco
Sawir - TeluguOne
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » Dabaylaha Dabaylaha ee Dubai
Sidee daruuraha u kala baxaan?